Blockchain Izindaba 11.05.2018 - Blockchain Izindaba
Bank of Canada ukusebenzisa blockchain for kweso sokuxazulula izibambiso
Okwamuva “Project Jasper” izilingo blockchain luye lwabonisa ukuthi Amaleja basakaza kuphumelela ngaso automating izibambiso nemizana ngesikhathi sangempela, ngokuvumelana Bank of Canada nozakwethu amabili phezu “izibambiso edidiyelwe kanye lokukhokha zokuhlala” iphrojekthi.
Gerry Gaetz, umongameli kanye CEO of Izinkokhelo Canada, kucashunwa:
“Lokhu kubonisa ukuthi kungenzeka ukuletha izinkokhelo ngendlela akukaze kwenziwe ngaphambi – ngu swapping ngqo imali abathengi ukuba nabathengisi, okuholela osheshayo zokuhlala.”
Korean exchange Upbit waseshwa abashushisi
Abashushisi eNingizimu Korea baye kubikwa ahlasela ngobukhulu cryptocurrency exchange kuleli zwe, UPbit. Abaphenyi kusukela abashushisi’ Ihhovisi Seoul ukuseshwa ehhovisi ikhanda exchange ngoMeyi 10.
UPbit esolwa ukukhwabanisa ubedayisa cryptocurrency kumakhasimende ukuthi empeleni ubambe, ngokusho kombiko.
I abashushisi’ ihhovisi kushiwo: “Siye kuvikelwe angaphandle kanzima kanye accounting izincwadi ngokusebenzisa ukudliwa. Ukuhlaziywa kulindeleke ukuba kuthathe izinsuku.”
Huawei kuhlanganisa Bitcoin isikhwama lokusebenza kuhlelo yesitolo
Abasebenzisi Huawei amafoni uzokwazi ukulanda Bitcoin wallets kumadivayisi abo okokuqala kokuqala ngoLwesihlanu.
Huawei, emhlabeni zezinkampani ezinkulu kwihendisethi umenzi, ukhulula BTC.com sika Bitcoin isikhwama AppGallery yayo, UMTHOMBO Alejandro de la Torre, Iphini likamengameli BTC.com sika yokusebenza kwebhizinisi.
Uthe AppGallery uzobe pre-efakwe kuwo wonke Huawei amafoni entsha.
Lo mnyakazo cishe uyoba nomthelela kakhulu emakethe Chinese, lapho Huawei mkhulu kakhulu mobile umdayisi ifoni. AmaShayina amabhlogo uhulumeni Isitolo Android ku-Google Play futhi ezinye izingxenye iTunes Apple, nokukhawulela ukufinyelela zokusebenza ezifana BTC.com sika. Nakuba China isivaliwe cryptocurrency zokuhweba amapulatifomu, abantu abakwazi Usesengumnikazi zemali virtual.
"Yithuba elihle ukuba badonse nemakethe Chinese,"De la Torre ngesikhathi eshayelwa ucingo. "Ukusetshenziswa cashless izinkokhelo nge zokusebenza Yinkhulu futsi Lwebulungisa yasebhange entula, ngakho kukhona ukusetshenziswa icala kuhle izinkokhelo mfihlo sikhule khona. "
Thumela Previous:Ukuhweba Bots ngoba Cryptotrading
Thumela Landelayo:Crypto Nentsha